Qalabka Dayactirka Excel. Soo-kabashada Excel. Hagaaji Faylasha Excel.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,619 cod)
maxaad DataNumen Excel Repair?
Ka soo kabashada wax badan oo ka mid ah tartamayaashayaga
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee soo-kabashada Excel. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen Excel Repair leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira!
Celceliska Heerka Soo-kabashada
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen Excel Repair sigaar cabaya tartanka
Waad ku mahadsantahay qalabkaaga, runti waxay iga caawineysaa si buuxda inaan u hagaajiyo feylkayga sare.
Badeecadaadu si sax ah ayey u shaqeysay.
M.Ss. Injineer Sare ee Korontada
Injineerada NorTecnica Ltd.
Waa barnaamij aad u wanaagsan. Sorta 'a "ma-brainer" oo aan jeclahay.
Anigu waxaan ahay nin xog ogaal ah runtiina waxaan isticmaalaa Foxpro marka loo eego xaashiyaha 'Excel'.
Laakiin noloshu sidaas uma socoto marka aad dadka kale la shaqeyso.
Haddii barnaamijkaagu shaqeyn waayo, aniga iyo saaxiibkay waxaan u dhaqaaqi lahayn hagaajinta gacanta anaga oo isticmaaleyna hex ama ASCII fayl daawade oo waxaan gacanta ku habeynay binary si loo xalliyo musuqmaasuqa. Maxaa jiid jiiday taas.
Hagaag taasi ma dhicin. Marka waxaan ku leeyahay shaqo fiican waxaadna helaysaa codkayga iyo mustaqbalkeyga PR.
Mar labaad mahadsanid. Waa hagaag lacagta.
La Taliyaha Xogta
DataNumen Excel Repair maalintiina waan keydiyey waxaanan kahelay xogtii aan uga baahnaa feylkeygii xumaaday. Aad ayey u fududahay in la isticmaalo, sifiican ayay aniga ila shaqaysay
DataNumen Excel Repair maalintiina waan keydiyey waxaanan kahelay xogtii aan uga baahnaa feylkeygii xumaaday. Aad ayey u fududahay in la isticmaalo, sifiican ayey ugu shaqeysay baahideyda, aadna waan ugula talinayaa!
Tiknoolajiyadda PIN, Inc.
Si qurux badan ayey u shaqeysay! Dhammaan ereyadayda iyo tayda (oo laga yaabo inay aad u dhib badan tahay) xogta gudbinta tixraaca hadda way soo noqotay! MAHADSANID!! Xilliga kuleylaha waxaan lahaa
Si qurux badan ayey u shaqeysay! Dhammaan ereyadayda iyo tayda (oo laga yaabo inay aad u dhib badan tahay) xogta gudbinta tixraaca hadda way soo noqotay! MAHADSANID!! Xilliga kuleylaha waxaan haystay waqti firaaqo ah oo aan wax kaga shaqeeyo, laakiin waxaan nahay starWaxaan ku soo laaban doonaa dugsiga si dhakhso ah waxaanan ku mashquulay shaqada jireed marka loo eego shaqada kumbuyuutarka, mana aanan helin waqti (ama qalbiga) oo aan dib u fadhiisto oo aan dib ugu galo toddobo boqol iyo sagaal iyo labaatan bayoolaji ereyada, qeexitaannada tixraacyo! Waxaan ku xanuunsanayay calooshayda rajada.
Waxaan rajeynayaa inaad heysato nasasho wanaagsan oo usbuuca ah, iyo nasasho nasasho iyo raaxo leh!
Kristi Rankin Macalin
Qalabka dayactirka ee Excel wuxuu awood u yeeshay inuu ka soo saaro dhammaan xogta qoraalka 2 faylal Excel ah oo kharribmay kuwaas oo furnaa lana keydinayay markii aan shil PC galay.
Qalabka dayactirka ee Excel wuxuu awood u yeeshay inuu ka soo saaro dhammaan xogta qoraalka 2 faylal Excel ah oo kharribmay kuwaas oo furnaa lana keydinayay markii aan shil PC galay. Si kastaba ha noqotee, qalabku ma uusan soo ceshan karin wax kasta oo leh dhammaan qaabeynta (geesinimada, midabada iwm) lost oo ay weheliso ku dhowaad nus qaaciddooyinka (inta badan kuwa murugsan ee gogosha isku xiray). Meeshii ay ka jireen dhibaatooyin suurtagal ah, qalabku wuxuu u jaray xaashidii hore ee shaqada xaashiyo dheeri ah sidaa darteed waad ogayd halka laga hubinayo khasaaraha - fikrad weyn. Isku soo wada duuboo waa natiijo aad uxun maadaama xogtu ay ahayd qaybtii ugu adkayd ee laga soo celiyo isha asalka ah. Mid ka mid ah feylasha si xun ayaa loo maareeyay oo aan la koobiyeyn karin, la furi karin (ama xitaa la tirtiri karin!) Barnaamij kasta oo MS ah! Guud ahaan qalabku wuxuu i badbaadiyey qiyaastii toddobaadyo shaqo. Waxay qaadatay wax ka yar hal maalin in feylasha dib loogu soo celiyo sidii caadiga ahayd iyadoo dib loogu celinayo qaabeynta nooc feylal aad u da 'weyn isla markaana la fiiriyo xogta. Xusuusin isticmaalayaasha, haddii qalabku u muuqdo inuu istaagay, samir, waxay qaadatay ku dhowaad hal saac in lagu xaliyo feylka adag ka hor inta aysan starsamee wax kasta
Janaayo 1, 2017
Xalka Raacaya Khaladaadka Caadiga ah iyo Dhibaatooyinka Faylka Excel
Faylkaan kuma jiro qaab la aqoonsan karo.
Excel waxay ka heshay waxyaabo aan la aqrin karin "filename.xslx".
filename.xls 'Lama Heli Karo.
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen Excel Repair v3.6
Taageero lagu hagaajinayo feylasha Excel xls, xlw iyo xlsx ee nooca Excel 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019 iyo Excel oo loogu talagalay qaababka Office 365.
Faylasha taageerada ee ay soosaaraan Excel ee Windows iyo Mac.
Taageer inuu ka soo kabsado xogta unugyada faylasha Excel.
Taageero dib u soo kabashada qaaciidooyinka, ay ka mid yihiin qaaciddada la wadaago iyo qaaciidada soo gashay.
Taageero si loo soo ceshado qaababka caadiga ah iyo qaababka caadada u ah unugyada iyo qaaciidooyinka.
Taageero lagu dayactirayo qaybo badan oo faylasha Excel ah.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waxaad ku hagaajin kartaa xls iyo faylka xlsx oo leh menu macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Taageero si loo sameeyo soo kabashada Excel iyada oo loo marayo xuduudaha xariiqda taliska.
Isticmaalka DataNumen Excel Repair inuu ka soo kabsado Faylasha Excel ee Musuqmaasuqa ah
Marka feylashaada Microsoft Excel .xls, .xlw iyo .xlsx ay kharribmaan ama waxyeelloobaan sababo kala duwan awgood oo aadan si guul leh ugu furi karin Excel, waad isticmaali kartaa DataNumen Excel Repair si loo xaliyo dhibaatada. Waxay baari doontaa feylka musuqmaasuqa ah waxayna kuu soo saari doontaa feylal cusub oo aan qalad lahayn.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta aanad ka soo kaban wixii fayl ah ee musuqmaasuq ama waxyeeleeyay ee 'Excel' leh DataNumen Excel Repair, fadlan xir wixii barnaamijyo kale ah oo wax ka beddeli kara faylka. Fadlan sidoo kale xiro Microsoft Excel.
Xulo feylka 'Excel' ee kharribmay ama waxyeelleeyay si loo hagaajiyo:
Waxaad ku qori kartaa magaca faylka Excel si toos ah ama guji kan
badhanka si aad u caleenta u xulato feylka.
Marka la eego, DataNumen Excel Repair wuxuu keydinayaa faylka go'an ee 'Excel' feyl cusub oo loogu magac daray xxxx_fixed.xls oo loogu talagalay .xls file iyo xxxx_fixed.xlsx faylka .xlsx, halkaas oo xxxx uu yahay magaca isha feyl ee isha. Tusaale ahaan, ilaha feylka 'Excel' ee loo yaqaan 'Damaged.xls', magaca asalka ah ee feylka go'an ayaa noqon doona Damaged_fixed.xls. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
batoonka, iyo DataNumen Excel Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta ilaha feylka isha.
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha feylka Excel si guul leh loo hagaajin karo, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale ah:
Hadda waxaad ku furi kartaa feyl go'an Excel adoo adeegsanaya Microsoft Excel.
Ku taageer luqado kala duwan GUI.
Taageer Isbaanish, Faransiis, Jarmal, Talyaani, Boortaqiis, Ruush, Jabbaan, Kuuriya iyo Shiinish fudud.
DataNumen Excel Repair 3.1 waxaa la sii daayay Diseembar 11, 2020
DataNumen Excel Repair 2.9 waxaa la sii daayay Nofeembar 2, 2020
DataNumen Excel Repair 2.8 waxaa la sii daayay Oktoobar 16th, 2019
DataNumen Excel Repair 2.7 waxaa la sii daayay Sebtember 16th, 2019
Hagaajinta waxqabadka soo kabashada.
DataNumen Excel Repair 2.6 waxaa la sii daayay Juun 8th, 2019
Adeegso tikniyoolajiyadda AI si aad u falanqeyso feylka.
Dib u naqshadeyn mashiinka dayactirka Dufcaddii.
Taageero si loo badbaadiyo dufcadda dayactirka Dufcaddii.
DataNumen Excel Repair 2.4 waxaa la sii daayay Janaayo 21th, 2019
Taageero Excel 2019.
Hagaaji mashiinka soo kabashada.
DataNumen Excel Repair 2.3 waxaa la sii daayay Ogosto 20th, 2018
Taageer Excel 2016 iyo Excel ee Xafiiska 365.
Hagaajinta dib u soo kabashada caanaha.
DataNumen Excel Repair 2.2 waxaa la sii daayay Diseembar 24, 2015
DataNumen Excel Repair 2.1 waxaa la sii daayay 7 Sebtember 2013
Taageero si loo soo ceshado qaaciidada la wadaago iyo qaaciidada la soo geliyey.
Taageero si loo soo kabsado qaabka tirada unugyada.
DataNumen Excel Repair 2.0 waxaa la sii daayay 22 Juunyo 2013
Taageer qaababka Excel 2007, 2010 iyo 2013.
Beddel is-dhexgalka adeegsadaha ee arjiga.
DataNumen Excel Repair 1.4 waxaa la sii daayay Maajo 23th, 2005
Hagaaji is-dhexgalka isticmaalaha
DataNumen Excel Repair 1.2 waxaa la sii daayay Febraayo 10th, 2004
Taageero lagu soo kabanayo qaaciidooyinka.
Taageero si loo soo ceshado magacyada xaashida shaqada.
DataNumen Excel Repair 1.1 waxaa la sii daayay Nofeembar 5th, 2003
Hagaajinta xawaaraha iyo saxnaanta soo kabashada xogta sare.
Ka dhig farriinta qoraalka mid kooban.
DataNumen Excel Repair 1.0 waxaa la sii daayay Ogosto 5th, 2003
Taageero si loo xaliyo xls iyo faylasha xlw ee nooca Excel 3, 4, 5, 95, 97, 2000, XP, 2003.
Taageerada isdhexgalka ee Windows Explorer, markaa waxaad ku hagaajin kartaa faylka xls oo leh menu macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Dayactir oo soo cesho dukumiintiyada Microsoft Word ee musuqmaasuqa ah (.doc iyo .docx files).
Dayactir oo soo cesho kaydinta xogta Microsoft Access ee musuqmaasuqa ah (.mdb iyo .accdb faylasha).